Tag: efamira efatra | Martech Zone
Tag: efamira efatra
Alahady, Desambra 13, 2020 Alakamisy, Desambra 24, 2020 Douglas Karr
Raha ny ankamaroan'ny sehatra teknolojia marketing ho an'ny fanaraha-maso ny lazany sy ny famakafakana ny fahatsapana dia mifantoka tanteraka amin'ny tambajotra sosialy, Brandmentions dia loharanom-baovao feno hanaraha-maso ireo na momba ny marikao amin'ny Internet. Izay fananana nomerika mifamatotra amin'ny tranokalanao na manonona ny marikao, ny vokatrao, ny tenifototra na ny anaran'ny mpiasa… dia arahi-maso sy hozahana. Ary ny sehatra Brandmentions dia manome fanairana, fanaraha-maso ary famakafakana ny fahatsapana. Ny Brandmentions dia ahafahan'ny orinasa manangana: Miorina amin'ny fifandraisana mifamatotra - Mahita sy mifandray
Alatsinainy Janoary 1, 2018 Alakamisy, Aogositra 12, 2021 Douglas Karr
Na dia maro aza ireo media sosialy manadio ny hery sy ny tanjaky ny varotra media sosialy biolojika, dia tambajotra sarotra hita ihany izany raha tsy misy fampiroboroboana. Ny dokam-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy dia tsena iray izay tsy nisy vao folo taona lasa izay fa nahazo $ 11 miliara tamin'ny taona 2017. Niakatra tamin'ny $ 6.1 miliara fotsiny izy io tamin'ny taona 2013. angona momba ny fitondran-tena. Ary koa,
Inona no fiantraikan'ny fanamarihana momba ny mpanjifa an-tserasera amin'ny orinasanao?
Zoma, Febroary 24, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Niara-niasa akaiky tamin'ny orinasa iray nanoro hevitra ireo orinasa mivarotra vokatra amin'ny alàlan'ny Amazon izahay. Amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny fanatsarana ny pejin'ny vokatra sy ny fampidirana paikady hanangonana tsikera avy amin'ny mpanjifa dia afaka mampitombo ny fahitana ny vokatrao amin'ny karoka anatiny izy ireo… ary nampitombo ny varotra tamin'ny farany. Asa sarotra izany, saingy azon'izy ireo ny dingana farany ary nanohy namerina izany ho an'ny mpanjifa bebe kokoa izy ireo. Ny serivisin'izy ireo dia manondro ny fiantraikan'ny fanamarihan'ny mpanjifa
Ampiasaina ny fizahana ara-tsosialy ho an'ny fanadihadiana momba ny antsinjarany mialoha
Asabotsy, Aprily 30, 2016 Zoma, Aprily 29, 2016 Douglas Karr
Efa nanao consulting marobe tamin'ny indostrianay izahay miaraka amin'ireo orinasa namolavola tahiry goavambe misy tahiry sarobidy. Matetika, ireo orinasa ireo dia fanamby hampitombo ny fiantraikan'ny marketing, hampitombo ny anjarany eo amin'ny tsena ary hanao izany mifototra amin'ny vokatra sy tolotra serivisy ataon'izy ireo. Rehefa mihady lalina kokoa amin'ny sehatr'izy ireo anefa isika, dia hitantsika fa nanangona antontan-taratasim-panangonana izay tsy ampiasaina izy ireo. Ireto misy ohatra vitsivitsy ao amin'ny Email Marketing